A ukuqubuka ku imilenze ingane kungaba uphawu lokugula. Yiqiniso, ukubeka i ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe kungaba onguchwepheshe. Nokho, uma bambonise ingane akunakwenzeka ukuthola ukuthi kungani kwaba khona ukuqubuka phezu imilenze Ungazama ekhaya ngokwakho.
Uphawu kungase kuhambisane yokungezwani komzimba, isimungumungwana, upokisi, scarlet fever. Ngaphezu kwalokho, ukuqubuka ezinyaweni kungaba ukubonakaliswa ukushisa prickly wengane abavamile. Kulokhu, uhlobo oluthile lokwelapha kuyadingeka. Into esemqoka - ukuze uhlanzeke.
The main izifo ebuntwaneni, ephelezelwa ukuqubuka
Sudamen simele nezinduna elincane elibomvu. Njengomthetho, basuke esisogwini ngemuva, entanyeni nasesifubeni ingane. Nokho, kungase kube ngokuxhamazela okungaka phezu imilenze ingane. Isizathu salokhu simo okweqile noma ukungahlanzeki. Qaphela ukuthi sudamen kubhekwa lesi sifo engalimazi kakhulu abangela yokusabela cutaneous.
Lapho yokungezwani komzimba ukuze eminye imikhiqizo ukudla, imikhiqizo kwenhlanzeko kanye nezinye izinto awahlabi ngemilenze yakhe emibi futhi abahambisele ukuqaleka ingane. Kulokhu, kufanele ngokushesha ukukhomba allergen ingqondo ngalesi simo futhi ukuqeda ingane naye. Yokungezwani komzimba ubhekwa isifo esiyingozi kakhulu okudinga babonisana saziso nge onguchwepheshe futhi ukwelashwa esifike ngesikhathi futhi efanele.
Ukuqubuka izinyawo okuyizinto pustules ezincane yellow noma elimhlophe ukhombise ukuthuthukiswa izifo ezifana vezilokupustulez. Lesi sifo senziwa Staphylococcus, abahlala isikhumba. Ngaphansi kwezimo ezikahle, ke icushiwe ngaye kuphakamisa yokusabela isikhumba. Ingozi yalesi simo wukuthi uma Bubbles kwakhiwa uyophahluka, ukutheleleka akwazi ukungena kubo. Ukuqubuka izinyawo kufanele luphathwe upende oluhlaza, susa ngokucophelela nge swab ukotini.
Induna ingane bangase bavele ukuthuthukiswa scarlet fever. Lena izifo ezithathelwanayo eziyingozi. Kungaba siyekele eziyingozi. Njengomthetho, lesi sifo kuhambisana ukuqubuka, hhayi kuphela kwi izinyawo, kodwa wonke isikhumba. Ngaphandle induna imfiva ngokuphawulekayo, ukuhlanza, umphimbo obuhlungu, ubuhlungu ekhanda. Uma kwenzeka yokwelashwa engafanele noma ukwehluleka ukuhambisana nalo embhedeni ukuphumula futhi udokotela izincomo, scarlet fever kungenzeka nzima inhliziyo nezinso isifo.
Uma ingane isimungumungwana, ukuqubuka kwembulwe imilenze yakhe kanye nezinye izingxenye zomzimba mayelana ngosuku lwesithathu. Njengomthetho, tiniketwe papules umbala obomvu. Ukuqubuka kunqoba ebusweni isikhumba futhi ephawulwe kahle. Kwandulelwe ukugunyazwa okwenziwe imfiva ukuphendula, amakhala yisisu, ukukhwehlela, kanye nezinye izimpawu of imikhuhlane. Ukwephuza ukufinyelela udokotela noma ukwelashwa ngokungahlelekile kungase kubangele ukuthuthukiswa ezinkingeni ezihlobene umgudu wokuphefumula ingane. Ngakho-ke, lapho kuqubuka of udokotela isifo luhlolo liyadingeka.
Shiya ukuqubuka esikhulu ngiphatheke kahle zingase zibe Indlela upokisi. Kulokhu, i ezithathelwanayo isifo izindawo zivela njengoba Bubbles in the ketshezi. Bona emibi futhi ukuletha ingane ukungakhululeki. Ingozi yalesi sifo wukuthi uma ingane edwengula off the uqweqwe ke endaweni yabo ungakheka izibazi. Ngemva kanye idluliselwe upokisi amasosha omzimba siyinguganaboya.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ekhaya, ezimweni eziningi, ungakwazi cishe kuphela imbangela ukuqubuka esikhumbeni izinyawo ingane. kufanele ukuya kudokotela ngoba ukuxilongwa esinembile. Udokotela kumele linqume ukuhlolwa, imiphumela okuyinto ziyoyizwa ukuphathwa kunesidingo.
Paracetamol kanye utshwala akufanele kube ukuhlanganisa
Yokuzijwayeza Medical e osteochondrosis esikhundleni amaphilisi ezinhlungu.
Izidakamizwa "Nimesil" kanye notshwala - ukuthi inhlanganisela enjalo? Imiphumela eyamukelayo kanye nezincomo
Indlela hlabelela? Kuyadingeka ukuba bazi
Izikole ezingcono kakhulu zobuciko eKrasnodar
Amaphilisi Abonayo "Sedasen Forte": yokusetshenziswa futhi analogue
Borax irayisi - wokudla okunempilo phezu kwetafula